Warbixinta TARTAN & TACLIIN: Wareegii 3aad habeenkiisii 1aad (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 8, 2018 1:49 b 0
Barnaamijka Tartan & Tacliin oo xalay galay warreegii 3aad, habeenkiisii 1aad ayaa waxaa ku tartamay labada dugsi sare ee kala ah Eyl Sare iyo Maxamed Cawaale Sare Bossaaso.
Tartanka ayaa ahaa hal qayb oo kaliya, waxaa samafinaalka u soo baxay dugsiga sare ee Maxamed Cawaale Bossaaso.
Habeen dambe waxaa barnaamijka ku tartami doona qaybta hore labada dugsi sare ee kala ah Cabdullaahi Ibraahin Ufeen iyo CC Sharmarke Gaalkacyo. Qaybta labaadna waxaa isku arki doona dugsiyada kala ah Mubaarak Dhahar iyo Shiikh Daahir Xasan Cagaaran.
Barnaamijka Tartan iyo Taclin waxaa sahlay Shirkada SOMTEL ,waxaana qayb ka ah Jaamacada Bada Cas, dallada waxbarashada ee Ahliga ah ee Pen, Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland iyo Radio Daljir oo aad habeen walba baahinta kala socotaan.
Maqaalo Kale 301 Wararka 20675